ကိုယ့်အမ ရဲ့ သတိုး သားလောင်း ကို မြူဆွယ်မိ လို့ မိန်းကလေးတစ် ဦး ဘ၀ပျက် မလိုဖြစ်ခဲ့ရ – Shwewiki.com
ကိုယ့်အမ ရဲ့ သတိုး သားလောင်း ကို မြူဆွယ်မိ လို့ မိန်းကလေးတစ် ဦး ဘ၀ပျက် မလိုဖြစ်ခဲ့ရ
January 11, 2020 By admin Funny
လက် မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။
သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (mini-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး။အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ်။သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်။ ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့ ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ၊ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း၊ သူ့ညီမလေးက ကျွန်တော့် အနားကို ကတ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။သူ့အစ်မနဲ့ လက်မထပ်ခင် ကျွန်တော့် တစ်ဘဝလုံးကို သူ့အစ်မဆီ လုံးဝ မပုံအပ်လိုက်ခင်၊ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ကြိမ်လောက် ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ ရှိနေချင် တယ်တဲ့။
သေဟဲ့ ဆိုပြီး ကျွန်တော် တော်တော်လေး လန့်သွားတယ်။ ဘာစကားမှတောင် ပြန်မပြော နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ဆက်ပြော ပါတယ် ။ညီမတော့ အိပ်ခန်းထဲ သွားတော့မယ်။ တကယ်လို့ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အတူတူ ပျော်မြူးချင်တယ်ဆိုရင် ညီမဆီ လာခဲ့ပါနော်တဲ့
ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ချာခနဲ လှည့်ပြီး ကျွန်တော့် ကားဆီ သွားဖို့ အိမ်ရှေ့ တခါးမကြီး ဆီ လျှောက်သွားလိုက်တယ်။ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဟိုက်ရော့ တမိသားစုလုံး ပါလား ???ကျွန်တော့်ရဲ့ ယောက္ခမလောင်း မိသားစု ပေါ့ဗျာ။ အားလုံး လက်ခုပ်တွေ တီးနေကြတယ်။ ယောက္ခမထီးကြီးဆို မျက်ရည်တွေ ဝဲလို့ ကျွန်တော့်ကို လာဖက်တယ်။
“အဖေတို့က သားရဲ့ ကိုယ်ကျင့် တရားကို စမ်းခဲ့ တာကွာ။ “သားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာ မိပါတယ်ကွာ။ကျနော် နောက်ဆုံး ယောက်ျားထုကြီးကို ကိုယ်တွေ့ ပညာပေး စကားလေး ပြောချင်တာ ကတော“ သတိ – သင့် ကွန်ဒုံးကို ကားထဲမှာ သေချာသိမ်းပါ . ”
Credit to Orginal Uploder
ကိုယျ့အမရဲ့ သတိုးသားလောငျးကို မွူဆှယျမိလို့ မိနျးကလေးတဈဦး ဘဝပကျြမလိုဖွဈခဲ့ရ
လကျမထပျခငျ လှနျခဲ့တဲ့ တပတျက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ကောငျမလေးက သူ့အိမျကို အလညျချေါပါတယျ။သူ့အိမျလညျး ရောကျသှားရော့ တအိမျလုံးမှာ သူ့ညီမ တဈယောကျပဲ တှတေ့ယျ။
သူ့ညီမလေး ဘယျလောကျညှို့အားပွငျးပွီး ဆှဲဆောငျမှု ရှိလဲဆိုတာ ပွောရငျ ယုံမှာတောငျ မဟုတျဘူး။ ကွညျ့အုံး အဲ့ဒီနမှေ့ာမှ အဲ့ဒီကောငျမလေးက (mini-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတျထားပွီး အတှငျးခံဘရာစီယာလညျး ဝတျမထားဘူး။အဲ့ဒီကောငျမလေးက ပွောတယျ။သူ့အဈမက အခုဆို အရေးကွီး ကိစ်စနဲ့ အပွငျကို ထှကျသှားတယျ။ ညနမှေ ပွနျလာမညျ ဆိုတဲ့ အကွောငျး ပွောပွဖို့ သူ့ကို မှာထား တယျတဲ့ ။
ဒါနဲ့ ကြှနျတျော အိမျထဲမှာ၊ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပွောနတေုနျး၊ သူ့ညီမလေးက ကြှနျတေျာ့ အနားကို ကတျပွီး တိုးတိုးလေး ပွောတယျ။သူ့အဈမနဲ့ လကျမထပျခငျ ကြှနျတေျာ့ တဈဘဝလုံးကို သူ့အဈမဆီ လုံးဝ မပုံအပျလိုကျခငျ၊ ကြှနျတျောနဲ့ တဈကွိမျလောကျ ဖွဈဖွဈ အတူတူ ရှိနခေငျြ တယျတဲ့။
သဟေဲ့ ဆိုပွီး ကြှနျတျော တျောတျောလေး လနျ့သှားတယျ။ ဘာစကားမှတောငျ ပွနျမပွော နိုငျဘူး။ဒါနဲ့ အဲ့ဒီကောငျမလေးက ဆကျပွော ပါတယျ ။ညီမတော့ အိပျခနျးထဲ သှားတော့မယျ။ တကယျလို့ နောကျဆုံး အနနေဲ့ အတူတူ ပြျောမွူးခငျြတယျဆိုရငျ ညီမဆီ လာခဲ့ပါနျောတဲ့
ကြှနျတျော ခကျြခငျြးပဲ ခြာခနဲ လှညျ့ပွီး ကြှနျတေျာ့ ကားဆီ သှားဖို့ အိမျရှေ့ တခါးမကွီး ဆီ လြှောကျသှားလိုကျတယျ။ တံခါးကို ဖှငျ့လိုကျတယျ ဆိုရငျပဲ ဟိုကျရော့ တမိသားစုလုံး ပါလား ???ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ယောက်ခမလောငျး မိသားစု ပေါ့ဗြာ။ အားလုံး လကျခုပျတှေ တီးနကွေတယျ။ ယောက်ခမထီးကွီးဆို မကျြရညျတှေ ဝဲလို့ ကြှနျတေျာ့ကို လာဖကျတယျ။
“အဖတေို့က သားရဲ့ ကိုယျကငျြ့ တရားကို စမျးခဲ့ တာကှာ။ “သားအောငျမွငျခဲ့တဲ့ အတှကျ အရမျးကို ဝမျးသာ မိပါတယျကှာ။ကနြျော နောကျဆုံး ယောကျြားထုကွီးကို ကိုယျတှေ့ ပညာပေး စကားလေး ပွောခငျြတာ ကတော“ သတိ – သငျ့ ကှနျဒုံးကို ကားထဲမှာ သခြောသိမျးပါ . ”
ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ပါ ပိုက်ဆံတွေ ကို ကြိုးတွေ နဲ့ တုတ်မထား ဖို့ပြောလိုက် တဲ့ J Naw
အ ချစ်ရေး မှာ ကံမကောင်းကြတဲ့ O သွေးလေးတွေ ရဲ့ အကြောင်း